Dilkii Khaashuqji: Trump oo sheegay in CIA-du aysan eedayn amiirka dhaxalsugaha ah ee Sucuduuiga - BBC News Somali
Dilkii Khaashuqji: Trump oo sheegay in CIA-du aysan eedayn amiirka dhaxalsugaha ah ee Sucuduuiga
Image caption Jamaal Khaashuqji ayaa waxa uu Istanbul u tegay inuu ka soo qaato dikumintiyo dhanka guurka ah
"War kama dambays ah maysan soo saarin," Mr Trump ayaa yiri mar ay weriyayaashu wax ka waydiiyeen qiimeynta CIA-da.
"Si gaar ah ayey wax u dareemayaan. Warbixinta waan hayaa, wax dhameystiranna maysan soo saarin, ma garan karo haddii qof un ay suuroobayso inuu soo helo in amiirka dhaxalsugaha ah uu sameeyay arrinta," ayuu yiri.
Bilowgii todobaadkan, Mr Trump ayaa waxa uu shaaciyay bayaan uu ku tilmaamayo in Amiirka dhaxalsugaha ah "ay suuragal tahay inuu si wanaagsan" u ogaa dilka Khaashuqji.
Bayaanka uu Mr Trump ayuu ku sheegay: "Waxaa suuragal ah inuu Amiirka dhaxalsugaha ah uu wax ka ogaa dhacdadaas musiibada aheyd - waa suuragal inuu ogaa iyo inuusanba ogeyn!"
17-kii Nofeembar, Xoghayaha Saxaafadda ee Aqalka Cad Sarah Sanders ayaa waxa ay weriyayaasha u sheegtay in Mr Trump uu kalsooni ku qabo in CIA-da kaddib markii uu wadahallo ku aaddan dilkii Jamaal Khaashuqji uu la yeeshay Agaasimaha hay'addaasi Gina Haspel iyo Xoghayaha Arrimaha Dibadda Mike Pompeo.